musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » FAA Inoburitsa Nyowani Boeing 737 MAX Yambiro
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Ndege dzakabatwa dzinofungidzirwa kunge dzakundikana zvemagetsi kutenderera kudzora kwemapaketi emhepo anopinza mweya mukati mekutakura zvinhu kubva kune dzimwe nzvimbo dzendege.
Yambiro yakaburitswa nezvenyaya inogona kudzvinyirira moto muBoing 737 MAX.
Boeing 737 MAX jets uye mamwe 737 mamodheru anokanganiswa neyekuchengetedza rairo.
Iwo odha inokanganisa dzimwe ndege mazana maviri nemakumi mana nepasi rose.
Iwo matambudziko anoita kunge haagume kune anetsekana Boeing 737 MAX. Panguva iyo US Federal Aviation Administration (FAA) inodzosera marongero ayo epakutanga achiisa zvese Boeing 737 MAX ndege munaNovember, dzinopfuura zana dzendege dzaiita sedzakatukwa dzakaiswa pasi zvakare muna Kubvumbi pamusoro pezvinhu zvine magetsi. Mhando nyowani yaBoeing, iyo 100 MAX 737, yakasimuka kekutanga muna Chikumi uye inotarisirwa kupinda mukushandira muna 10.
Asi muhurongwa hutsva, hwakapihwa nhasi, FAA inorambidza Boeing 737 Max & NG ndege kugona kutakura zvinobata moto, ichiona kuti ndege dzinogona kunge dziine dambudziko nemhepo inoyerera kudzora kupinda nekubuda kunze kwenhumbi.
Ndege dzeBoeing 737 Max uye mamwe 737 mamodheru anokanganiswa nemutemo wekuchengetedza, uyo unoda kuti vafambisi vaone kuti zvinhu zvese zviri mubati wenhumbi hazvitsva uye hazvipisi. Ndege dzakabatwa dzinofungidzirwa kuva ne "kukundikana kwemagetsi kuyerera kwepakeji yemhepo inoisa mweya mukati mekutakura zvinhu kubva kune dzimwe nzvimbo dzendege," sekureva kweFAA.
Iwo marongerwo anokanganisa dzimwe ndege mazana maviri nemakumi maviri nepasi rose, mazana matanhatu makumi matanhatu nenomwe akanyoreswa muUS. Boeing's 2,204 Max modhi yakave yakadzika pasi kubva munaKurume 663 mushure metsaona mbiri dzinouraya dzakauraya vanhu vese mazana matatu nemakumi matatu nevatatu dzakaratidza dambudziko pamabhodhi emakomputa. Kuenderera mberi kwekuferefeta kwave kungoita zvimwe zvekuchengetedza nyaya, uye kwete chete mune 737 modhi.
Boeing's 777s uye 787s akaongororwawo kuitira zvakachengeteka zvikanganiso. Iyo kambani pachayo yakurudzira vatakuri venhandare kuti vamise ndege dzedzimwe mhando mazana manomwe nenomwe muna Kukadzi mushure mekunge injini dzakawanda dzaputika mudenga, nemwedzi iwoyo iwoyo, iyo FAA yakaraira kuongororwa kwe777 Boeing 222s pamusoro pekunetseka pamusoro pekuparara kwepaneru. Kugadzira kunetsekana nezve "marara echinhu chekunze" akasiiwa mundiza nyowani kwaunza mega-liner ichiongororwazve.
Italy Council yeMakurukota Inobvumidza Matanho ekusimudzira ...